.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ♫သင်္ကြန် သီချင်းများ♫....(Mp3 ဒေါင်းမယ်)
၁.နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ~ (ရင်ဂို)
၂.ဖိုးညိုမြ ~ (စည်သူလွင်)
၃.ချမ်းပါတယ် ~ (ဂရေဟမ်)
၄.သက်ြန်မိုးရေ တန်ခုးလေ ~ (ရင်ဂို)
၆.ပိတော် တမျက်နှာ ~ (ဂရေဟမ်)
၇.သင်္ကြန်မိုး ~ (ဂရေဟမ်)
၈.ရေတွေစိုကုန်ပြီ ~ (စည်သူလွင်)
၉.နွေအလှ ~ (ဂရေဟမ်)
၁၀.ပိတောက်လက်ဆောင် ~ (စည်သူလွင်)
၁၁.ဒဂုံမောင် ~ (ဂရေဟမ်)
၁၂.ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို ~ (ရင်ဂို)
၁၃.တူးပို့ တူးပို့ ~ (စည်သူလွင်)
၁၄.နွေဦးကဗျာ ~ (ဂရေဟမ်)
၁၅.ရက်မြတ်သင်္ကြန် ~ (ရင်ဂို)
၁၆.ကမယ်ဆိုတီးပါမယ် ~ (စည်သူလွင်)
၁၇.နှစ်သစ်ချစ်ဦး ~ (ဂရေဟမ်)
၁၈.ရွှေဝါမြေ ~ (ရင်ဂို)
၁၉.သင်္ကြန်လုလင် ~ (ဂရေဟမ်)
၂၀.ရေပက်ခံမယ် ~ (စည်သူလွင်)
၂၁.မန်းမြို့ သူဇာမေ ~ (ရင်ဂို)
၂၇.ဘယ်သူပြောလဲ ~ (ဂျောက်ဂျက်)
၂၈.အလိုက်သိဦး ~ (Jenny ~ ဘရိတ်ကီ)
၂၉.မန္တလေးမှာဟေ့ ~ (ယုန်လေး)
၃၀.ဟားရေ ~ (ကြက်ဖ)
၃၁.လွှတ်ထားလိုက် ~ (ဆူဇီ)
၃၂.ရာသီစာ ~ (ဂျောက်ဂျက် ~ ဂျူး)
၃၃.ဇာတာ ~ (၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း)
၃၄.ရာသီစာတေး ~ (ရသ)
၃၅.ခါတော်မီ ~ (ရတု)
၃၆.လူပေါင်းစုံပျော်မယ် သင်္ကြန် ~ (ယုန်လေး ~ ဆူဇီ)
၃၇.ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ~ (သိန်းစိုးလင်း ~ ဂျူး)
၃၈.သတိတော့ထား ~ (ဟဲလေး)
၃၉.သင်္ကြန်အထာ ~ (သဇင်)
၄၀.တပည့်ကြီးပဲလုပ်တော့မယ် ~ (ဝေလျှံ သခင်)
၄၁.ရေမွှေးဆွတ်ခဲ့ ~ (B3)
၄၂.စပွန်ဆာမလိုပါ ~ (Babycakes)
၄၃.အသည်းယားအောင်လုပ်နေလား ~ (ဆူဇီ)
၄၄.ပါသွားပြီဟေ့ ~ (အစ္စဏီ)
၄၅.စိတ်ကူးမယဉ်နဲ့ (ဝေလျှံ ~ ဆူဇီ)
၄၆.ဟိုလိုလို ဒီလို ~ (မိုးဟေကို)
၄၇.ဘယ်မှာစက်တော်ခေါ်နေလဲ ~ (CRAB)
၄၈.အသားကုန်ကဲ ~ (ရတနာမိုင်)
၄၉.၀ိုက်သာဝိုက် ~ (ဟဲလေး)
၅၀.ပုန်းမနေနဲ့ ~ (သဇင်)
၅၁.အချမ်းပြေ ~ (ဆင်ပေါက်)
၅၂.ကလေးကို ~ (Wai လျှံ ~ Jenny)
၅၃.ငါ့ရဲ့ သင်္ကြန်နေ့များ ~ (အိမ့်ချစ်)
၅၄.သင်္ကြန်ပွဲလေး ~ (ပူစူး)
၅၅.အင်းလျားလမ်းမှ ကြိုဆိုပါ၏ ~ (မေသူ)
၅၆.သင်္ကြန်ပွဲတော် ~ (အစ္စဏီ)
၅၇.မရိုးတဲ့သင်္ကြန် ~ (Jenny)
၅၈.ဖက်ထားပါမယ် ~ (ဖြိုးကျော်ထိုက်)
၅၉.မင်းလေးရှိမှ တို့လန်းမယ် ~ (ထိုက်ထိုက်)
၆၀.လျော့ပါဦး ~ (D ယံ)
၆၁.ကမယ် တူတူ ~ (ဆန်းသစ်လ)
၇၀.ရွှေမန်းမာလာ ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၁.မင်္ဂလာသင်္ကြန် ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၂.မန်းတောင်ရိပ်ခို – ဇော်ဝမ်း ၊ မို့မို့ဇော်ဝင်း
၇၃.နှစ်ကူးမင်္ဂလာ – ဇော်ဝမ်း ၊ မို့မို့ဇော်ဝင်း
၇၄.နွေအလှ ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၅.ရွှေဝါမြေ ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၆.ညိုမြ ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၇.နှစ်သစ်ချစ်ဦး ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၈.ပိတောက်တစ်မျက် ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၇၉.မြူမှောင်ဝေကင်း ~ (ဇော်ဝမ်း ~ မို့မို့ဇော်ဝင်း)
၈၀.နှစ်သစ် ~ (ဇော်ဝမ်း)
၈၁.သင်္ကြန်မိုး – ရန်အောင်
၈၂.မိုးနတ်မယ် – ဇော်ဝမ်း
၈၃.သင်္ကြန်တေးသံ – ရန်အောင်
၈၄.ရေပက်ခံမယ် ~ (ဇော်ဝမ်း)
၈၅.ကြိုလှည့်ညိုနွဲ့ ~ (ရန်အောင်)
၈၆.ရွှေဝါမြေ ~ (ဇော်ဝမ်း ~ ရန်အောင်)
၈၇.တန်ခူးလ ~ (ရန်အောင်)
၈၈.ဖိုးညိုမြ ~ (ဇော်ဝမ်း)
၈၉.ကိုယ်စားပြောပေးပါ ~ (ရန်အောင်)
၉၀.ပိတောက်တစ်ခက် ~ (ရန်အောင်)
၉၁.မြူမှောင်ဝေကင်း ~ (သန်းမြတ်စိုး)
၉၂.နွေဦးရွှေမန်းမာလာ ~ (သန်းမြတ်စိုး ~ ဟန်တင် ~ ဖိုးညိုမြ ~ မြတ်ဝတ်ရည်)
၉၃.နှုတ်ခွန်းဆက် ~ (အဖွဲ့)
၉၄.တစ်ဖက်သားအချစ် ~ (အေးအေးခိုင်)
၉၅.ချစ်အာရုံ ~ (သန်းမြတ်စိုး)
၉၆.နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ ~ (နေအောင် ~ အေးအေးခိုင်)
၉၇.ညချမ်းသဘင် ~ (မြတ်ဝတ်ရည်)
၉၈.နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှ ~ (နေအောင် ~ အေးအေးခိုင်)
၁၀၀.ရွှေမန်းသူ ~ (မေရွက်ဝါ)
၁၀၁.ပျော်ပါစေ ~ (တီးလုံး)
၁၀၂.နွေအလှ ~ (ဇော်ဝမ်း)
၁၀၃.နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ~ (ဟန်တင်)
၁၀၅.ပိတောက်တစ်မျက်နှာ ~ (ဇော်ဝမ်း)
၁၀၆.နွေဦးကဗျာ ~ (မီမီဝင်းဖေ)
၁၀၇.နှုတ်ခွန်းဆက် ~ (သန်းမြတ်စိုး ~ မြတ်ဝတ်ရည်)
၁၀၉.နွေတန်ခူးရဲ့ Holiday ~ (Aက ~ Reo)
၁၁၀.စပ်စလူးစိန်ဓါတ်ဘူးပိန် ~ (သြရသ ~ စစ်သွေး)
၁၁၁.ကဲသင်္ကြန် ~ (ဘရိတ်ကီ ~ မီလျံ)
၁၁၂.ပျော်ရအောင် ~ (ဒီးဒီး)
၁၁၃.လေးရက်တည်း ~ (Dယံ)
၁၁၄.သင်္ကြန်ရောက်တိုင်း ~ (အိမ့်ချစ်)
၁၁၅.ဗီတာမင်မလိုအင်နာဂျီမလို ~ (ဟဲလေး ~ မေသျှင်ဝန်း ~ ချိန်းချိန်း)
၁၁၆.မမေ့နိုင်တော့ပါ ~ (ဟဲလေး ~ သဥွှာနွယ်ဝင်း)
၁၁၇.ပက်တယ်သွက်တယ် ~ (ထူးကျော် ~ ခန့် ဇော်)
၁၁၈.မင်းနဲ့ အတူ ~ (ခင်စုစုနိုင်)
၁၁၉.ပျော်စရာသင်္ကြန် ~ (Nကိုင်ရာ)
၁၂၀.အချစ်အတွက်နှစ်သစ်ကူး ~ (နိုနို)
၁၂၁.စိတ်ပျက်တယ် ~ (နွေးနွေးချစ်ဖွယ် ~ ဖြိုးသီရိခေတ်)
၁၂၂.မောပြီ ~ (ဖြိုးသီရိခေတ်)
၁၂၃.ရောင်စုံမြို့ ကလေး ~ (ဆိုတေး)
၁၂၄.ငရဲကြီးမယ် ~ (စွဲလန်းဖြူ)
၁၂၅.လာ လာ လာ ~ (waiလျှံ ~ မှူးရတနာ)
၁၂၆.မင်းလေးအတွက်အနွေးဓာတ် ~ (ဝေလွင်ဦး)
၁၂၇.ကဲမှာပဲ ~ (ယံယံ)
၁၂၈.ပက် ~ (ကျော်ထွဋ်ဆွေ)
၁၂၉.ပဲများခဲ့ ~ (အစ္စဏီ)
၁၃၀.ပြိုင်ဘက်မရှိ ~ (Jenny)
၁၃၁.မနှစ်ကမင်း ~ (အိမ့်ချစ်)
၁၃၂.မကြာမီ လာမည် ဂေါ် ~ (Nine One ~ မိစန္ဒီ)
၁၃၃.ရည်းစားရှိလား ~ (သားကြီး)
၁၃၄.သင်္ကြန်ပျိုမေ ~ (ပူစူး)
၁၃၅.သင်္ကြန်အိပ်မက် ~ (လွှမ်းပိုင် ~ Bobby Soxer)
၁၃၆.အကုန်လုံးပျော် ~ (မေသူ)
၁၃၇.အန်းဂရီးဘတ် (Angry Bird) ~ (ဟဲလေး)
၁၃၈.မောင်း မောင်း မောင်း ~ (နီနီခင်ဇော်)
Posted by Thurainlin at 08:02